ကောက်ပင်ဘေးမဲ့တော, ကောက်ပင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သန့်ရှင်းရာဌာန - ဘေလီဇ်စီးတီး
မြောက်အမေရိက ဘေလီဇ် ဘေလီဇ်စီးတီး
ဖုန်းနံပါတ်: +501 223-5004;
hours: နေ့စဉ် 8:00 ကနေ 16:30 ဖြစ်သည်။
(အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သီဟိုဠ်အပင်၏အအဖြစ်များတတ်သည်၏ "ကောက်သစ်ပင်" ဆိုလိုတာကဒါမှမဟုတ်ကောက်ပင်,) reserve ကောက်ပင် - ငှက်ထက်ပိုမို 275 မျိုးစိတ်များ၏ထူးခြားတဲ့မွေးမြူရေး site ကို။ အဆိုပါအရံ၌ရှိကြ၏: ဂွ, တောတူးမြောင်း, ဒီရေတောများ။ ကောက်ပင် - Eco-ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်စံပြနေရာအရပ်။
အဆိုပါအရံလောကီသားတို့သည်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု - ဆိုက် (ကလမ်းညွှန်မပါဘဲနူးငှားရမ်းတားမြစ်သည်) မှာလမ်းပြနှင့်အတူတစ်ဦးကနူးယူပါ။ အဆိုပါတူးမြောင်းများနှင့်မြစ်များပေါ်ပင်လယ်ကူး, ထိုလမ်းညွှန်သစ်တောလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိသစ်သားတံတားမှတဆင့်တစ်ဦးအပန်းဖြေလမ်းလျှောက်အကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ အလှအပနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအာမခံ!
နူးလှေလှော်ကစားနည်းအကြောင်းကို3နာရီကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကြောင့်, အစက်အပြောက် (အဘယ်သူမျှမ fixed စျေးနှုန်း) အပေါ်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်း တစ်ဦးဧည့်လမ်းညွှန်ကိုတောင်ဒေသခံတစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်စကားပြောနိုင်မည်အဖြစ်, ဘာမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် conceding မပေးပါ။
မတူကွဲပြားမှုကြွယ်ဝ 12 စတုရန်းကီလိုမီတာ၎င်း၏ပိုင်နက်နှင့်အတူသစ်ပင် Reserve တရွေ့ရွေ့:
ငှက်တို့သည် Heron, သိမ်းငှက်, Hummingbird ကိုရှားပါးငှက်ဘရာဇီး yabiru (အရှည် - 1.5 မီတာ, ရှည် - 2.8 မီတာ, အရှည်နှုတ်သီး - 30-35 စင်တီမီတာ);
တိရိစ္ဆာန်များ: မိကျောင်း, howler မျောက်, iguanas, ရေချိုလိပ်;
သစ်ပင်များ: သီဟိုဠ်, ထင်းရှူး, ပိတ်ပင်။
ရွာ၏ပိုင်နက်တွင်ဂွန၏ပုံကမ်းပေါ်, ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာအတူအဓိကအဆောက်အဦနဲ့6တည်းခိုခန်းပါဝင်သောပုဂ္ဂလိက Mini-ဟိုတယ်ကောက်ပင် Lodge ဖြစ်ပါသည်။ မလျော့နည်းလူကြိုက်များဟိုတယ် Beck အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာ (ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာ, cable ကိုတီဗီ, လေအေးပေးစက်နှင့်အတူအခန်းထဲရှိ) ။ ဒါဟာနေဖို့လူကြိုက်အများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအရံဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၌တည်ရှိ၏ ဘေလီဇ်၏ ။ ကောက်ပင်ကျေးရွာ (ဘေလီဇ်အတွက်အသက်အကြီးဆုံးတဦး) - ထိုအရံများ၏ပထဝီစင်တာ။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း - ကားအငှားလုပ်ငန်း။ မှတ်တိုင် - မြို့တော်ကို လိမ္မော်ရောင်လမ်းလျှောက်၏ (ထံမှ ဘေလီဇ်စီးတီး - 50 ကီလိုမီတာ);
အကောင်းဆုံးအချိန်အလည်အပတ်ခရီး - (ဧပြီမှဒီဇင်ဘာလ) ကိုခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီ။
ငှက်ဘရာဇီး yabiru - အကြီးမားဆုံးတဦး။ သူကတောင်မိကျောင်းအာရှကြယ်လိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ရှားပါး, ဒါကြောင့်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုကိုဓာတ်ဆီတက်သည်သိုလှောင် - ဘေလီဇ်၏လမ်းများပေါ်တွင် Refueling ။ ဓာတ်ဆီစကားမစပ်, စျေးကြီး - အမေရိကန် 1 ဂါလံနှုန်း $ 3.5-4 ။
Black ကမြစ် - ဂရိတ် Morass
ရွှေပြတိုက် (San Jose)
အမ်မလီ Ratazhkovski သူမ၏ရည်းစားနှင့်အတူ spa မှာမွေးနေ့ကျင်းပ
နှစ်စဉ် Aster - အမျိုးအနွယ်ကိုအနေဖြင့်ကြီးထွားလာ
ဂျြောဂြီယနျအတွက်ပဲမျိုးစုံ lobio ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပစ္စုပ္ပန်ကဘာလဲမဖွစျနိုငျ - နိမိတ်လက္ခဏာများ
သူ့လူငယ်အတွက် Daniel Craig
သုပ် "Swan fluff" - စာရွက်
- Veliky Novgorod ဆွဲဆောင်မှု
တစ်ပါးပျဉ်းနှင့်အတူသားရေဂျာကင်အင်္ကျီ - တိုင်းအရသာများအတွက်အများဆုံးစတိုင်မော်ဒယ်များ 62 ဓါတ်ပုံ